June | 2016 | AMAPHUPHO
By info on June 30, 2016 in amaphupho nezincazelo
By info on June 28, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi uthukuthele ngemvamisa kusho ukuthi kunebhadi ekusaseni lakho. Uma ucikekile nje kancane kusho ukuthi uzothola izindaba ezimbi maduzane kodwa uma umuntu ekuthukuthelise ngempela uzohlulwa yizitha zakho. Uma uthukuthele ngoba kunomuntu okuthukile kuzoba nokulwa nophathina wakho noma ebhizinisini lakho.
By info on June 26, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ubona imbongolo kungasho izinto ezinhle noma ezimbi. Uma uyigibele imbongolo kuzoba nenkinga ekusaseni lakho futhi abantu obubathemba bazokuhlubuka. Uma imbongolo ikulandela uyokhathazwa umona nenkohliso kodwa konke kuyodlula. Uma ubona imbongolo kodwa ungathintani nayo kusho ukuthi uzophumelela naphezu kwezinkinga.
By info on June 25, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi umlomo wakho uyanuka lokho kusho ukuthi abantu sebephonsa ithawula ngawe ngenxa yezinto ozenzayo. Uma uphupha ngamazinyo akho uzomenywa endaweni ejabulisayo maduzane kodwa uma likhishwa izinyo kusho ukuthi uzolahlekelwa umngani. Uma uphupha ngomlomo wakho ugxaza amathe kusho ukuthi uzolahlekelwa yimali maduzane.
By info on June 20, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ubona inyanga kusho ukuthi uzophumelela ngesikhathi ungalindele Đ ikakhulukazi kwezothando. Uma inyanga iba mnyama kodwa uyohlupheka futhi ube mpofu. Inyanga egcwele isho ukuthi uyoshada masinya uma usemncane futhi ube nabantwana abahle uma umdadlana. Kuyishwa elibi ukubona izinyanga ezingaphezu kweyodwa esibhakabhakeni.